Vaovao - Fihenan'ny famolavolana tsindrona plastika
Ny fihenan'ny tsindrona plastika dia iray amin'ireo fananana rehefa mitete ny hafanan'ny material. Ny tahan'ny refin-tsindrona atsindrona dia ilaina amin'ny famaritana ny refin'ny asa farany. Ny sanda dia manondro ny habetsaky ny fihenan-dàlana asehon'ny sangan'asa iray aorian'ny nesorina tamin'ny lasitra ary avy eo nangatsiaka tamin'ny 23C nandritra ny 48 ora.
Ireto fampitahana ireto dia voafaritra amin'ny alàlan'ny fampitahana:
izay S no tahan'ny fihenan'ny bobongolo, Lr ny refin'ny asa farany (in. na mm), ary ny Lm ny refin'ny lavaka (ao na mm). Ny karazany sy ny fanasokajiana ny akora plastika dia manana lanja mihena mihena. Ny fihenan-tsasatra dia mety hisy fiovana marobe toy ny fihenan'ny workpiece ny tanjaka, ny tsindrona ary ny fanerena. Ny fampidirana fantsom-panafody sy fanamafisana, toy ny fibre vera na mpiorina mineraly, dia afaka mampihena ny fihenan'ny.
Ny fihenan'ny vokatra plastika aorian'ny fanodinana dia mahazatra, fa ny polymônaly kristaly sy amorôma dia mihena amin'ny fomba hafa. Mihena ny sombin-plastika rehetra aorian'ny fanodinana azy ireo tsotra fotsiny vokatry ny famatrarana azy ireo sy ny fihenan'ny hafanana rehefa mangatsiatsiaka amin'ny hafanan'ny fanodinana izy ireo.
Ny fitaovana amorphous dia mihena kokoa. Rehefa mangatsiaka ny fitaovana tsy amora mandritra ny fizotran'ny fizotran'ny tsindrona tsindrona dia miverina amin'ny plymer henjana izy ireo. Ireo rojo polymer izay mandrafitra ny akora tsy misy fotony dia tsy misy firindrana manokana. Ohatra pf fitaovana amorehanina dia polycarbonate, ABS, ary polystyrene.
Ireo fitaovana vita amin'ny krystaly dia manana teboka miempo kristaly voafaritra. Ny rojomika polymer dia mamolavola azy ireo amin'ny fametrahana molekiola voalahatra. Ireo faritra baikoina ireo dia kristaly miforona rehefa mihamangatsiaka amin'ny polytreur ny polymer. Ho an'ny akora polymer semicrystalline, ny fananganana sy ny fitomboan'ny fonosana rojo molekiola ao amin'ireo faritra kristaly ireo. ny fihenan'ny tsimokaretina injioio ho an'ny akora semicrystalline dia avo kokoa noho ny fitaovana tsy amôrômbia. Ny ohatra amin'ny fitaovana kristaly dia nylon, polypropylene, ary polyethylene. Ny lisitra fitaovana plastika maromaro, na amorphous na semicrystalline, ary ny fihenan'ny bobongony.
Mihena ny thermoplastics /%
ara-nofo mihena ny bobongolo ara-nofo mihena ny bobongolo ara-nofo mihena ny bobongolo
Akrilika 0.2-1.0 PC-ABS 0.5-0.7 polystyrene 0.4-0.8
Ny fihenan'ny fihenan'ny fiovan'ny toetr'andro dia midika fa ny fandeferana amin'ny alàlan'ny polymers amore dia tsara lavitra noho ny an'ny polyméraly kristaly, satria ny crystallites dia misy fonosana voatanisa kokoa sy tsara kokoa amin'ny rojo polimerika, ny tetezamita dia mampitombo ny fihenan-danja. Saingy amin'ny plastika tsy misy fotony dia io ihany no singa ary mora isaina.
Ho an'ny polymers amôrômbia, ny soatoavina mihena dia tsy ambany fotsiny, fa ny fihenan-tsakafo kosa dia haingana mitranga. Ho an'ny polymer amorezika mahazatra toy ny PMMA, ny fihenan-tsasatra dia ho ao amin'ny filaharany 1-5mm / m. Izany dia vokatry ny fihenan'ny 150 (ny maripanan'ny fiempo) hatramin'ny 23C (hafanan'ny efitrano) ary azo ampifandraisina amin'ny coefficient an'ny fitrandrahana hafanana.
Manaraka: Inona avy ireo sokajy valo amin'ny lasitra tsindrona?